We cant hide Our activities On Social Network
Secure Your Online Banking & ATM Online Banking နှင့် ATM အသုံးပြုရာတွင် သတိပြုရမည့်အချက်များ ******************************************************************** 1- Online Banking အမြဲအသုံးပြုသော Smart Phone, laptop,PC,Tablet Deive များကို အမြဲတမ်း Security Update ပြုလုပ်ပါ.. Internet Browser များမှဝင်ရောက်လေ့ရှိလျှင် Browser များကိုအမြဲတမ်း Update ပြုလုပ်ထားပါ။ 2- ငွေလွှဲမှု ပြုလုပ်ပြီးတိုင်း မိမိဘက်မှ Screen shoot သို့မဟုတ် PrintOut ပြုလုပ်ထားပါ။ 3- Online Banking Account ကို နေ့စဉ်ပုံမှန်စစ်ဆေးပါ။ 4- Bank Account2ခုရှိပါက ဖြစ်နိုင်လျှင် တစ်ခုသာ Online နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ 5- လိုအပ်သည့်အချိန်မှလွဲပြီး ငွေကြေးအများဆုံးထည့်ထားခြင်းမှ ရှောင်ကျဉ်ပါ။ 6-Online Banking Account အား Public Wifi (cafe Shop, Airpot) အစရှိသည့်နေရာများမှ ၀င်ရောက်ခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။ 7- ငွေလွှဲ ပြုလုပ်ပြီးတာနဲ့ Logout ချက်ချင်းလုပ်ပါ။ Browser history များ Cookie များကို ရှင်းပစ်ပါ။Browser တွင် Password သိမ်းထားခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ပါ။ 8- Online Banking Account ရဲ့ Password ကို တစ်ပတ်တစ်ခါ သို့မ
What is Cyber Forensics ? Part (20)
What is Cyber Forensics ? Part (20) E-mail Forensics (Part 4+) E-Mail Header အကြောင်း Email header ထဲမှာဘာတွေတွေ့နိုင်သလဲဆိုရင် ဘယ်သူကပို့တာလဲ ဘယ်သူ့ဆီကိုလဲ Email Server ဘယ်နေရာတွေဖြတ်လာသလဲ (spam , virus check) ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာနေပို့တယ် (IP address) စတဲ့အချက်အလက်တွေပါဝင်ပါတယ် .. Email Header ကိုစစ်ဆေးမယ်ဆိုရင် bottom To Top အောက်ကနေ အထက်စစ်ဆေးရပါမယ်..။ လူအများဆုံး အသုံးပြုတဲ့ gmail နဲ့ဥပမာ ပြထားပါတယ်။ စစ်ဆေးသူက Header ထဲမှာပါတဲ့ အသုံးနှုန်းတွေကို သိရှိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်...။ IP address တွေကိုသိရှိနိုင်ပေမဲ့ ip hide လုပ်ထားမယ် Spoof လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ အခက်ခဲတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ အရင်တစ်လောက Phishing mail တွေ KBZ bank user တွေဆီကို ပို့တဲ့မေးလ်မှာAustralia နိုင်ငံက university တစ်ခုရဲ့ civil law ဌာနာမှ mail တစ်ခုကို spoof လုပ်ပြီးတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ # cyberforensics # cybercrime Second photo Source kbz
What is Cyber Forensics ? Part (18) E-mail Forensics
What is Cyber Forensics ? Part (18) E-mail Forensics Type Of Crime E-mail malware ဖြန့်ရန် အတွက်အသုံးပြုခြင်း Spam Mail (ကြော်ငြာအဖြစ်လဲတွေကရတတ်သည်) အနိုင်ကျင့် အကျပ်ကိုင်ရန် အတွက်အသုံးပြုခြင်း (Cyber Stalking) လိမ်လည်ရန်အတွက် အသုံးပြုခြင်း (Fraud Mail) မိမိလိုလားချက်ရရှိအောင် တစ်ဖက်လူအားဆွဲဆောင်ခြင်း (phishing) (Email မှာတင်မက telephone message ဖြင့်လဲဆွဲဆောင်တတ်သည်) မိမိလိုလားချက်ရရှိအောင် တစ်ဖက်လူအားဆွဲဆောင်ခြင်း (phishing) အမျိုးအစားများ ----- - မက်လုံးဖြင့် မြူဆွယ်ခြင်း ( ဥပမာ ဖုန်းကို လျှော့ဈေးဖြင့်ပေးမယ်) - ကြောက်စိတ် ကို အသုံးချပြီး မြူဆွယ်ခြင်း (Bank Security အရ သင့် account password ကိုချက်ချင်းချိန်းပါ) (လက်တလော kbz bank email ပုံစံမျိုး) - www.google.com အစား www.gooogle.com ဟု link တွင်စာလုံးအမှားအသုံးပြုပါသည်) အသုံးပြုနေကြ (အများအသုံးပြုနေကြ) link များအားအသုံးချပြီး click နှိပ်စေခြင်း ( - စိတ်ပါဝင်စားစေမည့် အကြောင်းအရာကို အသုံးချကာ attachment file အား download ယူစေခြင်း (virus ၀င်စေရန်) - ရင်းနှီးသော လူအမည်အား အသုံးချပြ
What is Cyber Forensics ? (Part 17) Steganography Part (3)
What is Cyber Forensics ? (Part 17) Steganography Part (3) Documents ဖိုင်များအတွင်းထည့်သွင်းခြင်း pdf, world file များအတွင်း မိမိသိုဝှက်လိုသော data ကိုသိုဝှက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ... Video ဖိုင်များအတွင်းထည့်သွင်းခြင်း video file များဖြစ်တဲ့ mp4,mpeg,.avi စတဲ့ file များအတွင်းသိုဝှကိခြင်းဖြစ်ပါတယ်.... video file size များရင်များသလို ထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ အတွက် သိရှိဖို့ခက်ခဲပါတယ်... Forensics ပြုလုပ်ရန်လဲခက်ခဲပါတယ် .. Folder အတွင်းထည့်သွင်းခြင်း Folder အတွင်း မိမိသိုဝှက်လိုသော data ကိုသိုဝှက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ... White Space Steganography Space, tab ခြားတဲ့နေရာများမှာ မိမိသိုဝှက်လိုသော data ကိုသိုဝှက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ... သတိပြုမိရန်ခက်ခဲပြီး Forensics ပြုလုပ်ရန်လဲခက်ခဲပါတယ် Email,Spam mail အတွင်းထည့်သွင်းခြင်း Email,Spam mail များအတွင်းမှာ ထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ======================= How to Forensics ? photo Steganography အတွက် ပုံအနေအထားမမှန်သော ပုံများကို သတိထားပြီး ကြည့်ခြင်း RGB , resolution , pixel စတဲ့စသဘောတရားများကို နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ... Forensics Software
What is Cyber Forensics ? (Part 16)
What is Cyber Forensics ? (Part 16) Steganography ဓတ်ပုံအတွင်း Secret ထည့်သွင်းခြင်း jPEG,JPG,PNG,BMP စတဲ့ ဓတ်ပုံတွေမှာ မိမိဝှက်ချင်တဲ့ စာသားကို ထည့်ပြီး အများမသိအောင် ၀ှက်ထားခြင်းပါ ... ၀ှက်တဲ့နည်းစနစ်ကတော့ ဓတ်ပုံရဲ့ Pixel နဲ့ Resolution အနေအထားကိုလိုက်ပြီး bit တွေကို တစ်နေရာခြင်းစီအလိုက်အစားထိုးတာပါ ...တစ်နေရာခြင်းစီ အလိုက် အစားထိုးလိုက်တဲ့အတွက် အများအမြင်မှာ မသိသာတော့ပါဘူး ... Eg..... ပုံရဲ့ bit stream က အောက်ပါအတိုင်းဆိုပါစို့ .. . (10111110) (10111111) (10111111) (10111111) (10111111) (10111111) (10111111) (10111110) အဲအထဲမှာ A ဆိုတာထည့်ဝှက်မယ် ဆိုရင် .... A ရဲ့ binary က 10000001 ဖြစ်ပါတယ်။ ထည့်ဝှက်တဲ့ ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ပုံရဲ့ bit stream က အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသွားပါမယ် ....နောက်ဆုံးအလုံးတွေကို ကြည့်ကြည့်ပါ.. (10111111) (10111110) (10111110) (10111110) (10111110) (10111110) (10111110) (10111111) အထက်ပါနည်းကို Least bit Intersection (LSB) လို့ခေါ်ပါတယ်။ mp3 ဖိုင်းများအတွင်းထည့်သွင်းခြင်း mp3 .wav ဖိုင်းများအတွင်း မိမိဝှက်ချင်တဲ့ စာသား သို့မဟုတ် စကား ကို ထည့်ပြီ
What is Cyber Forensics ? (Part 15) Steganography ဆိုတာ မြင်သာတဲ့ အရာဝထ္ထုထဲကို ကိုယ်ဝှက်ထားချင်တဲ့ အရာကို ပေါင်းထည့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် ... မြင်သာအောင်ပြောရရင် ... ငယ်ငယ်တုန်းက ကောင်မလေးကို ရည်းစားစာပေးချင်တယ် ... သိမှာလဲကြောက်တယ် ... အဲတော့ စာအုပ်ငှားသလိုလိုနဲ့ ရည်းစားစာကို စာအုပ်ထဲမှာ စာညှပ်ပေးတယ် ..... ဒီသဘောပါပဲ . Steganography ဆိုတာဂရိဘာသာစကားကနေလာတာဖြစ်ပြီး ဂရိတွေကစတင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တရုတ်တွေ မွန်ဂိုလက်အောက် ရောက်တုန်းကလဲ သုံးခဲ့ပါတယ် ... အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ် ပထမကမ္ဘာစစ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်းမှာလဲ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ် ... ။ လက်ရှိမှာ အသုံးပြုနေတာတွေကတော့ - virus ဖြန့်ခြင်း... - ဥပဒေနဲ့ မညီတဲ့ Message တွေပို့တဲ့အချိန်.. - Spy တွေ အချင်ချင်း Message ပို့တဲ့အချိန်.. - Hacking ပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်.. - လျှို့ဝှက်ချက်ကို မသိအောင် သိမ်းရန် စသည်ဖြင့်ရှိပါတယ်.. PHOTO အတွင်းထည့်သွင်းခြင်း MP3 အတွင်းထည့်သွင်းခြင်း Website အတွင်းထည့်သွင်းခြင်း (Forensics ပြုလုပ်ရန် ခက်ခဲ) Email အတွင်း ထည့်သွင်းခြင်း (spam mail အဖြစ်) DVD CD အတွင်းထည့်သွင်းခြင်း
Secure Your Online Banking & ATM Online Banking ...
What is Cyber Forensics ? (Part 17) Steganography...